अनुहार पहिचान पुलिस शरीरमा निर्मित क्यामेराको हो OMG समाधानहरू
अनुहार पहिचान हाम्रो एयरपोर्टहरू, कार्यस्थलहरू, र घरहरूको सुरक्षा रूपान्तरण गरिरहेको हुन सक्छ, तर कानून प्रवर्तन मा, जहाँ एक नयाँ र शक्तिशाली प्रविधिको उत्सुकता लिन को लागी आशा गर्न सक्छ, यो फ्लैट नौकायन भएको छैन। अशुद्धता, गैरकानुनीपन, पक्षपात र अप्रभावीताको आरोप सामान्य बनेको छ। तर वास्तविक समस्या अनुहार पहिचान समाधान नियन्त्रण गर्ने सबै ईन्जिनहरूलाई तैनाती हो वास्तविक संसारको लागि तालिम दिन आवश्यक छ। र, अझ उत्कृष्ट रूपमा, टेक्नोलोजीको प्रयोग र प्रणालीकरणको वरिपरि र्‍यापहरू सही रूपमा आर्किटेक्ट गर्नु आवश्यक छ।
अनुहार पहिचान मूल रूपमा विशिष्टता आश्वासन र पहुँच नियन्त्रणको लागि, नियन्त्रणित सर्तहरूमा अपरेट गर्न र एक व्यक्ति को हो जुन उनीहरू दावी गरेको हो भनेर पुष्टि गर्नको लागि बनाइएको थियो। अब क्यामेराले भीडको छानबिन गर्छ, हरेक पारित अनुहारलाई वाच सूचिसँग तुलना गरेर। यो आफैमा जटिलताको साथ ग्रस्त छ। तर जब एक खेल हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? प्रणाली डेटा डाटा, वातावरणीय अवस्था र स्कोरि doors ढोकाको लागि कसरी खाता राख्न सक्दछ? कसरी प्रयोगकर्ताहरू फोकस टेक्नोलोजीबाट परिणाममा सार्न सक्छन्?
अब समूहमा गोद लिने क्रममा, यी चुनौतिहरू निर्धारण गर्न पर्याप्त ट्रेक्शन हुन सक्छ। पुलिस बल सक्रियतापूर्वक अनुहारको पावती परीक्षण गर्दैछ, प्रयोगका केसहरूमा काम गर्दछ। अझ धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी छ, तर त्यो तैनाती चुनौतीको उत्तर वास्तविकतामा उनीहरूको अगाडि हुन सक्छ।
गत हप्ताको समाचारले एफबीआईले अमेजनको अनुहारको स्वीकृति परीक्षण गरिरहेको छ भन्ने खबर प्राइभेसी हलबाट निराशाको अपेक्षित स्तरहरूसँग भेट भएको थियो जसले कानून कार्यान्वयनमा अनुहार पहिचान गर्ने निर्णय खराब अवधि हो। यस्तो हुन्छ, एफबीआईले उल्लेख गरेको उदाहरणका लागि प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो कम्तिमा पनि विवादास्पद कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ: भेगास शूटर, स्टीफन प्याडॉकलाई हेर्नका लागि हजारौं घण्टा रेकर्ड गरिएको भिडियो खोजी गर्नु। हामीसँग प्रतिनिधि र विश्लेषकहरू छन्, आठ प्रति शिफ्ट, 24 /7काम गर्दै तीन हप्ता भिडियो रेकर्डिंगको माध्यमबाट एफबीआईका सहायक सहायक निर्देशक क्रिस्टीन हलवर्सनले नोभेम्बरमा AWS बैठकलाई भने।
यद्यपि धेरै कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूले रेकर्ड गरिएको भिडियो रेकर्डिंग, समय र प्रयास बचत गर्न अनुहार पहिचानको प्रयोग गर्छन्, वास्तविक संसारमा वास्तविक समयमा प्रयोग गर्न यो धेरै नै गाह्रो छ। सानो दृश्य सूचीको विरूद्ध भीड सार्वजनिक स्थानमा प्रत्येक दर्शकको जाँचको गणित अनुहारको पहिचानलाई यसको सीमिततामा धक्का दिन्छ। केवल धेरै राम्रा प्रणालीहरूले यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्दछन्। नतिजाको रूपमा, अझै पनि असाधारण थोरै प्रत्यक्ष अनुहार मान्यता पारंपरिक पुलिसिंगमा प्रयोग भएको छ। तर त्यो परिवर्तन हुन लागेको छ।
वास्तविक शक्ति अनुहार पहिचानको लागि विकल्पहरूको जाँच गर्ने एउटा बल भनेको लन्डनमा महानगर पुलिस हो। कमिश्नर क्रेसिडा डिकले गत वर्ष भनेका थिए कि अनुहारको पहिचान मिनेटले नै राम्रो हुँदै गयो। मलाई लाग्छ कि जनताले हामी कसरी यो टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न सक्दछौं र यो हाम्रोलागि प्रभावकारी र कुशल छ कि छैन भनेर सोच्नको लागि अपेक्षा गर्ने छ। तर डिसेम्बरमा, जब मेट पुलिसले शहरको सोहो इलाकामा एउटा छानामा राखिएको क्यामेराको गुँडको साथ एउटा क्रिसमस जनसाधारणलाई चाहिएको अपराधीहरूको सूचीको सूचीमा राख्नको लागि एउटा पार्कमा खडा गर्‍यो, यसले गोपनीयता कार्यकर्ताहरूले नक्कली जवाफ दिए। बिग ब्रदर वाचका निर्देशकले यसलाई पुलिसको समय र सार्वजनिक पैसाको भय waste्कर अपव्ययको रूपमा बोलाए र भने कि पुलिसले यस्तो खतरनाक र कानूनविहीन टेक्नोलोजी छोड्दा यो राम्रो भएको छ।
प्रविधिको विवादास्पद सुविधाहरूको पहिचान गर्दै, मेट पुलिसले जोड्नको लागि आफ्नो उत्सुकता स्पष्ट गरेको छ। इभान बालहटचेट, प्रत्यक्ष अनुहार पहिचानको लागि मेटको रणनीतिक नेतृत्व, डिसेम्बरमा एक विज्ञप्तिमा भनियो कि हामी धेरै विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग सम्पर्कमा रहेका छौं, केही जसले यस प्रविधिको सक्रियताका साथ विरोध गरिरहेका छन् ताकि स्पष्टता देखाउन र सकारात्मक बहस जारी राख्न हामीले आमन्त्रित गरेका छौं। व्यक्तिहरू र समूहहरूलाई यस तैनातीमा अनुहार पहिचान टेक्नोलोजीको प्रयोगमा अविश्वसनीय दृष्टिकोणहरू सहित।
अनुहार पहिचानको भिन्नतामा, शरीरमा लगाउने क्यामेराहरूले सामूहिक अवलम्बन गरिसकेका छन्। यी शरीरमा लगाउने भिडियो उपकरणहरूले अब पुलिस वर्दीको ग्लोबल पहुँच गर्दछ, प्रमाण प्रबन्ध, अफिसर सुरक्षा, र सार्वजनिक सुविधा प्रदान गर्दछ। शारीरिक-लगाइएको क्यामेराले शारीरिक वा क्लाउड-आधारित भण्डारण प्रणालीहरूमा अफलोडिंगका लागि भिडियो रेकर्ड गर्दछ। शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू लाइभ स्ट्रिम भिडियोहरू नियन्त्रण कोठामा फिर्ता। अरूले स्वचालित रूपमा भिडियो रेकर्डि। सक्रिय गर्न हतियार होलस्टरहरूमा लिंक गर्छन्। मोबाइल उपकरणहरूको विकास हुने बित्तिकै क्यामेराको नयाँ मोडेलहरू जुन स्मार्टफोनको प्लेटफार्ममा आधारित हुन्छन् थप कमान्डि become हुने क्रममा छन्। यसको मतलब दुई प्रविधिहरू भेट्नेछन्। शरीरमा लगाएको क्यामेरामा अनुहार पहिचान बुझ्ने अर्को चरण हो। चाहने अपराधीहरू, चासोका व्यक्तिहरू, हराइरहेका बच्चाहरू, संवेदनशील वयस्कहरूको सूची सूचीको साथ अधिकारीहरूलाई अनुमति दिँदै ... सूचीमा गइरहेको छ।
डिसेम्बरमा, लन्डनले आफ्नो हरियो भ्यानमा तर्क गरेझैं, हजारौं मील टाढा अर्को विश्व शहरमा अनुहार पहिचानको भिन्नै परीक्षा भइरहेको थियो। यो परिक्षणले हेडलाइटहरू बनाएन। यसका सुविधाहरू अज्ञात थिए। तर यो अनुहार पहिचान कसरी अग्रणी पुलिसिंग मा तैनात हुनेछ अधिक वर्णनात्मक छ। लन्डनमा जस्तै, सबै भन्दा राम्रो शहर सडकहरूमा गएर करीव दुई दुई हजार व्यक्तिको वाच क्याटलगको साथ।
तर यो परीक्षण रोक्न र शिकार गर्न, शरीर क्यामेरामा अनुहार पहिचान सहित, चाँडै सीसीटीभी वा सर्भेलांस भ्यान भन्दा चाँडो। यो परीक्षणले केही अधिकारीहरूलाई लगाएको उपकरणहरू लगाउँथ्यो जुन एउटै वाच सूचीबाट वास्तविक-समयमा काम गर्थ्यो। पहिलो घण्टा भित्र, दुई पक्राऊहरू ती बडी क्यामेराबाट अर्को फ्रिलिving अनुहार पहिचान म्याचहरू थिए। संदिग्ध व्यक्तिहरुलाई अहिले दुर्व्यवहार गरिएको छ।
रोक्नुहोस् र खोजी आफै विवादास्पद हो। त्यस्ता शक्तिहरूले सहमति गरेर प्रहरीको मूलमा जान्छन्, प्रोफाइलिंग र पक्षपात र औचित्य बारे प्रश्न उठाउँछन्। आलोचना जस्तोसुकै भए पनि, यो सडकबाट हतियार लिएर स्वामित्वमा रहेकालाई पक्रन, अत्यन्तै कुशल हुन सक्छ। पहिचान पुष्टिकरण विधिको कुञ्जी अंश हो। अनुहार पहिचानका साथ शरीर क्यामेरा निश्चित गर्नुहोस् कि पहिचानहरू ठीकसँग जाँच गरियो, सबै नीतिसँग अनुरूप। परिचित कानून भake्ग गर्नेहरू, चासो व्यक्त गर्ने व्यक्तिको पहिचान होस् वा नहोस्, संवेदनशील नाबालिगहरू र वयस्कहरू, सबै त्यस्ता रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ। बुद्धिको नेतृत्वमा फ्रन्टलाइन पुलिसि toलाई मद्दतको रूपमा यसले गम्भीर फाइदाहरू प्रस्तुत गर्दछ। माथि उल्लेखित पक्राउहरू केवल त्यस्ता प्रविधिद्वारा सम्भव भएका थिए।
सीमितताहरू सेट गर्दै:
शरीर क्यामेरामा अनुहार पहिचानको प्रयोगले जातीय पक्षपातको आरोप विरूद्ध पनि सुरक्षा प्रदान गर्दछ। नीति अनुहार पहिचान द्वारा पहिचान नभएको ती खोजी अधिकारीहरुलाई पन्छाउन सकिन्छ, जब रोकिन्छ पनि। जहाँ अभियोग लगाईन्छ र निश्चित समुदायमा ओभर-पोलिसिस कम-स्तर अपराधमा खोजी गर्दछ, शरीर क्यामेरामा अनुहार पहिचानले सन्तुलन प्रदान गर्दछ। यो सुरक्षा को यो प्रकारको छिटो व्यापक स्वीकृति को सुविधा को लागी हो।
शरीर क्यामेरा मा अनुहार मान्यता पनि निगरानी वाहनहरु र CCTV क्यामेरा देखि मैचको लागि माध्यमिक पुष्टि दिनेछ। प्रारम्भिक म्याच पछि, पैदलमा एक अधिकारी व्यक्तिमा जान्छ र शरीर क्यामेराबाट दोस्रो जाँच चलाउँदछ, उही वाच सूचीबाट चलिरहेको। मात्र यदि त्यहाँ एक मेल छ जो अगाडि लगिन्छ। आफैंमा, यो तथाकथित बोगस पोजिटिभ बिरूद्ध धेरै भौतिक संरक्षण हो। यो एक व्यक्ति एक व्यक्ति पक्राउ मा कुनै निष्कर्ष निर्णायक निर्णय हुनु अघि व्यक्ति संचार गर्न दिन्छ।
धार कृत्रिम खुफिया:
समान क्यामेराको लिस्टहरू र प्रत्येक अन्यमा क्यामेराको जडानले एज-इंटेलिजेंसको बृहत लाभहरू खोल्छ। यसको अर्को लाभ भनेको सुरुवाती खेल दिनको लागि एज-इंटेलिजन्ट बडी क्यामेरा प्रयोग गर्ने सम्भाव्यता हो, मौलिक रूपमा घासको चाउलाई कम गरेर, म्याच त्यस्तै एआई इञ्जिन प्रयोग गरेर केन्द्रीय क्लाउड-आधारित प्रणालीमा पठाइन्छ, वा फरक एआई इञ्जिन प्रयोग गरेर, वा धेरै एआई इञ्जिनहरू, कुनै पनि 'म्याच' अपरेटरमा प्रस्तुत गर्नु अघि अझ बढी सही फिल्टर दिन। ती सबै दुई सेकेन्डमा हुनेछ।
यो वर्षको अनुहार हो जब अनुहार मान्यताले अन्तर्निहित पूर्वाग्रह र असहायताको आरोपलाई हिलाउँछ। यो वर्ष हुनुपर्दछ जब मान्यता छ कि सबै अनुहार पहिचान टेक्नोलोजी एकजुट हुँदैन। बिभिन्न उद्देश्यहरुका लागि बिभिन्न उपकरण प्राप्त गर्नु पर्छ। र नियन्त्रणित सर्तहरूमा त्यस्ता ईन्जिनहरूको बाँझी मूल्यांकनले वास्तविक ग्राहक सन्दर्भ र परिणामहरूको प्रमाणलाई मार्ग दिन पर्छ।
अपरेशनमा आज शरीरमा लगाउने क्यामेराको पहिलो पुस्ताले प्रमाण व्यवस्थापन प्रणालीका लागि भिडियो फुटेज रेकर्ड गर्नमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। अब, शारीरिक क्यामेरा 2.0 प्रत्यक्ष भिडियो स्ट्रिमिंग, अनुहार पहिचान, र अन-उपकरण एज- AI मा फोकस सार्दछ। शरीरले पहिरिएको क्यामेराको यो अर्को पुस्ता आउँदो बर्षहरूमा 4G र 5G नेटवर्कहरूमा व्यवस्थित गरिने अरबौं अन्य IoT संयन्त्रमा सामेल हुनेछ। अन्तमा, जction्क्सनले आज प्रयोग गरिने शरीर क्यामेराका प्रकारहरू देख्दछ कि कम्फर्टाइज्ड, ठूला-स्क्रीन स्मार्ट फोनहरूमा रूपान्तरण गर्दछ जुन साम्राज्य एआई एनालिटिक्स र फ्रन्टलाइन अफिसरलाई रिच डाटा प्रोडक्शनको साथ एक क्याप्चर र स्ट्रिमि cap क्षमतामा सामेल हुनेछ। एकल-उद्देश्य रेकर्ड मात्र क्यामेराको अवधि समाप्त हुँदैछ।
अनुहार पहिचानको लागि, 2019 मा आर्गुमेन्टहरू मार्केटिंग र व्यावसायिक सुरक्षाको लागि क्षमताको पूर्ण अनियमित प्रयोगको वरिपरि हुनुपर्छ। सिलिकॉनमा एआई सस्तो आईपी क्यामेरामा प्रत्यारोपित, सबैमा पहुँच योग्य। कानून प्रवर्तन मा यस प्रविधि को उपयोग एकदम ध्रुवीकरण हुन रोकिन्छ।
र यति नै, पोलिसिंगको चिन्ता जति छ, 2019 अनुहार पहिचानको लागि मोड लिन्छ। परीक्षणहरू परिमार्जनमा रूपान्तरण गर्दछ। डिप्लोइमेन्टहरूले परिणाम दिन्छ। विवाद जित्नेछ। अधिकांश जनताले व्यक्तिगत सुरक्षा र अनियमित गोपनीयता माथि सुरक्षा छनौट गर्दछ।
अनुहार पहिचान पुलिस बॉडीमा लगाएका क्यामेराहरूमा आउँदैछ पछिल्लो पटक परिमार्जित गरिएको थियो: अक्टोबर 8th, 2019 by व्यवस्थापक
4172 कुल दृश्यहरू4हेराइ आज